Maqaallada Sesie Bonsi ee ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Sesie Bonsi
Ku dhawaad ​​qof kastaa wuu ka cabsadaa soo dejinta app kale marka ay u fadhiistaan ​​cashada makhaayadda. Sida Covid-19 uu u horseeday baahida dalabka iyo lacag-bixinta aan lala xidhiidhin, daalka abka wuxuu noqday calaamad labaad. Tignoolajiyada Bluetooth-ka ayaa loo dejiyay inay hagaajiso macaamil ganacsiyadan maaliyadeed iyadoo u oggolaanaysa lacag-bixinno aan taabasho lahayn oo kala fogaansho dheer ah, iyadoo ka faa'iidaysanaysa abka jira inay sidaas sameeyaan. Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa sharraxday sida masiibadadu ay si weyn u dardargelisay qaadashada tignoolajiyada lacag-bixinta dhijitaalka ah. 4 ka mid ah 10kii macaamiisha US ayaa haysta